नेपाली जनताले सरकारबाट सेवासुविधा लिन पाउनु स्वाभाविकै हो । सबैले करसँंगै राजश्व बुझाएका छन् । नेपाल सरकारको निगरानीमा रहेका सरकारी संस्थाबाट नेपाली जनताले सित्तैमा सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । तर, सरकारी कार्यालयहरुले सेवाग्राहीहरुको काम गर्न मान्दैनन ।
सिधा रुपमा सरकारी कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्ति भएकोतिर काम लिएर गयो भने काम हँुदैन । त्यही सिधासाधी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता, सेवासुविधा पाएका छन् । लुगासमेत त्यही जनताले तिरेको करबाट लगाएका छन् तापनि उनीहरुकै काम गर्नमा सरकारी कर्मचारी अल्छीपन देखाउँछन् ।
सर्वसाधारणले एक छाक मिठो नखाएर, आङ छेक्ने लुगा नलगाएर, आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालय नहाली राज्यलाई कर तिरेका छन् । जनता र राष्ट्रको लागि हामी काम गर्छाैं, उनीहरुकै सेवासुविधामा हामी समर्पित छौं भनेर सरकारी कर्मचारीले जागिर खाएका छन् । सरकारी कर्मचारीहरुले गर्ने काम ‘दिन कटानी, माना पचानी’ जस्तै छ । राजनीतिक दलको झोला बोक्ने, कार्यालय आएर हाजिर गर्ने, फेसबुक चलाउने, नचाहिँदो गफगाफ गर्ने त्यति नै हो यिनीहरुको काम । यिनीहरुलाई जसरी हुन्छ दिन कटाउनु मात्रै छ ।
कोही काम लिएर सरकारी कार्यालयमा पुग्यो भने तिनीहरुको रुखो बोलीवचन सुन्नैपर्छ । जनताको काममा यति ढिलासुस्ती गर्छन् कि कहिलेकाहीँ त सरकारी कार्यालय जानै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । पैसा खानको लागि फाइल नै अड्काएर राखिदिन्छन् ।
सरकारी कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यकक्षमा प्रायः भेटिँदैनन् । कहिले क्यान्टिनमै बोलाउन जानुपर्छ कहिले कार्यालयको छतमा । कहिलेकाँही त काम गर्न नपरोस् भनेर अर्कोका कोठामा गएर बसिरहेका पनि भेटिन्छन् । जनताले तिरेको करबाट जडित तारको फोनबाट आफन्तसँंग घण्टौंको कुराकानी हुन्छ ।
सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने पहिलो व्यक्तित्व नै सरकारी कर्मचारी हुन् । जनताको सम्पत्ति लामो हात गरेर घरतिर दौडाउने पनि यिनै कर्मचारी हुन् । किन्न पाएको छैन बिग्रियो भन्ने खबर सुन्नमा आइहाल्छ । अनि त्यही सामान घरतिर लिएर जान्छन् ।
स्पष्ट भाषामा भन्ने हो भने सरकारी कर्मचारी देशका एक नम्बरका ठग र भ्रष्ट्राचारी हुन् भन्ने आम मानिसको बुझाइ छ । देश बिगारेकै यिनीहरुले हो भन्नेहरुको जमात ठूलो छ । महिनाको १५ हजार रुपियाँ तलब खाने सरकारी कर्मचारीले छोराछोरीलाई महंगो विद्यालयमा पढाएको देखिन्छ । मिठोमसिनो खाएकै छ, काठमाडौंमा घर ठडाएको छ ।
यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? यो भ्रष्टाचार होइन ? जनताको छोराछोरीचाहि सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने ? सरकार कर्मचारीको चाहिँ महंगो निजीमा । कस्तो कानुन हो सरकार यो ? अहिले हरेक नेपालीको टाउको ५८ हजार रुपियाँ बराबरको ऋण छ । यत्रो ऋण हुनुको कारण नै सरकारी कर्मचारी हुन् । यिनीहरुको माग कहिल्यै सकिँदैनन् । आज एउटा भोलि अर्को जनताले तिरेको कर बालुवामा पानी मिसाएझैं भएको छ । विकासको स्वरुपमा केही परिवर्तन आएको छैन । पाँच वर्षअघि बनाउन थालिएको पुलमा एउटा इँटासमेत थप्न सकिएको छैन तैपनि नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋण हे¥यो भने दैनिक थपिरहेको छ ।
घुस पाइयो भने नहुने काम गर्न पनि सरकारी कर्मचारी तयार हुन्छन् तर सरकारबाटै पाउनुपर्ने सेवासुविधा पनि घुस नखुवाई पाइँदैन । हजार रुपियाँ पनि घुस खाने सरकारी कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट देशविदेश घुमेका छन् । मिटिङ भत्ता पनि यिनीहरुले लिएकै छन् । घुस खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीको सपना जनता र राष्ट्र ठगेर आपूm धनी बन्ने । कर्मचारी कार्यालयमा छ कि छैन् कसैलाई अत्तोपत्तो छैन् । सरकारले अनुगमन पनि गर्दैनन् । हरेक कार्यालयको नियममा १० बजेभित्र हाजिर गरिसक्नुपर्नेछ । कोही १२, कोही दुई बजे आइपुग्छन् । यस्ता काम नगर्ने भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी किनेर सरकारले नै दिइरहेको छ । एउटा कर्मचारीले दुई लाखदेखि तीन करोड रुपियाँसम्मका सवारी साधन चढेका छन् त्यो पनि जनताको पैसामा । सवारी साधन किनेर मात्रै पुग्दैन मर्मतदेखि लिएर इन्धन र पेट्रोल पनि सरकारले नै दिनुपरेको छ ।
यता, सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिएको छ । आफन्त भेट्न जाने, खसीबोका किन्न जाने, घुम्न र छोराछोरी विद्यालय पु¥याउन पनि सरकारी गाडीको प्रयोग गरिरहेका छन् । बिदाको दिनसरकारी गाडी चल्दा खर्च बढेको छ ।
सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा बढ्दो काम घट्दो । वर्षैपिच्छे यिनीहरुको तलबभत्ता बढ्छ तर गरिब जनताले के पाउँछन् ? अझै पनि नेपालमा मागेर खानेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन । भोकका कारणले आत्महत्या रोज्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । यही हो लोकतन्त्र र गणतन्त्र । यस्तै दिन देख्न पाइयोस् भनेर नेपाली जनताले आन्दोलन गरेका हुन् ? सरकारी कर्मचारी कार्यालय आउँदा चाहे हिंडेर आउन् चाहे गाडी चढेर, कसलाई मतलब ? काम गरेबापत उनीहरुले तलब पाएका छन् । घुस पनि खाएका छन् ।
सरकारी क्षेत्रमा वर्षौदेखि आफ्नै आफन्त घुसाउने प्रथा रहिआएको छ । पढेलेखेका, ज्ञान, सिप र दक्षता भएकाले जागिर पाउने स्थिति छैन । जसले गर्दा साक्षर देशका नागरिक नै बेरोजगार छन् । अरुकोभन्दा आधा तलबमा जागिर खान्छौ भन्दा पनि दक्ष जनशक्तिले पाएका छैनन । देशका कर्णधारहरु नेपालमा जागिर नपाएर विदेसिएका छन् । काम नपाएर बाटोमा भौतारिदै हिंडेका छन् । अरुको राष्ट्रमा आफ्नो रगतपसिना बगाइरहेका छन् । तर, सरकारले ती नेपालीको दुःख देख्दैन । अहिले भएका कर्मचारीबाट देश विकास होइन विनास हुन्छ ।
यिनीहरुबाट सेवासुविधा र छिटोछरितो सेवाको आश गर्नु पनि गलत हो । राजनीतिक दलका झोलेहरु सरकारी कर्मचारीको रुपमा स्थापित छन् । हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याइन्छ । यी दलाल र ठगहरुको तलब, सेवासुविधा बढ्छ ।
बाटोमा मागेर खानेहरुको बारेमा सरकार बोल्दैन । उनीहरुको विषयमा कसैलाई चासो छैन । सरकारले उनीहरुलाई मान्छे गन्दैनन् । नेपाली नागरिक नै होइनन् जस्तो व्यवहार उनीहरुमाथि गरिएको छ । देशका भ्रष्ट कर्मचारीलाई मात्र सरकारले नागरिकमा समावेश गरेको जस्तो देखिन्छ । अझै पनि यस्ता कतिपय जिल्ला छन् जहाँ तुइनको सहाराबाट खोला तर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिखेर भगवान् भरोसा हुने हो भन्दै तुइनबाट ओहोर गर्नपर्ने हुन्छ । यस्तो जिल्लामा बजेट घोषणा गर्नुको सट्टा सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउँदै ठिक्क छ ।
तलब सरकारी कर्मचारीलाई खुवाउनुपरेको छ । काम भने दलालीमार्फत हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरुले सामान खरिदबिक्री गर्दा पनि कमिशन खाने गरेका छन् । २० लिटर इन्धन लाग्यो भने ५० लिटरको बिल देखाउँछन् । गाडी मर्मत गर्न २० हजार रुपियाँ लाग्छ तर बिल एक लाख रुपियाँको बन्छ ।
यिनीहरुले करारमा पनि आफ्नो आफन्त राख्छन् । सरकारी कर्मचारीबाट नेपाली जनता कायल भइसकेका छन् । यिनीहरुलाई देखेर नेपाली जनतालाई घृणा लाग्दछ । भ्रष्टाचार गर्ने बानी लागेपछि यिनीहरलाई घृणा गरोस् कि गाली केही मतलब नै छैन ।
यिनीहरुकै कारण सरकारी कार्यालयमा दलालीहरुको बिगबिगी छ । कानूनमा लेखिएअनुसार सरकारी कागजातहरु कार्यालय बाहिर लैजान पाइँदैन । सरकारी कार्यालयको छेउछाउमा कार्यालय खोलेर लेखनदास गर्ने, वकीलहरु र बिचौलियाहरुले सरकारी कागजात गेटबाहिर ल्याएर मिलाएको प्रशस्तै देखिन्छ ।
कति दलालहरुले त आफ्नो घरमा पनि यस्ता फाइलहरु लैजान्छन् । लेखनदासको रुपमा काम गर्ने बिचौलियाहरुलाई न प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्दछ न त कार्यालयका हाकिमले । किनकि बिचौलियासंँग मिलेर सरकारी कर्मचारीहरुले घुस खान्छन् ।
पाँच सय रुपियाँमा हुने काम दुई हजार रुपियाँ लिएर गर्छन् । राति त्यही पैसाको बाँडफाँड गर्छन् । यातायात कार्यालय र मालपोतमा सबैभन्दा धेरै दलालीहरु छन् । बिचौलियाहरुको इसारामा सरकारी कार्यालयका कर्मचारी चलेका छन् । देश नै बिचौलियाको हातमा छ । देश चलाउने नेताहरु पनि अरु देशका बिचौलिया नै हुन् ।
यस्तो देशमा जनताले कहाँबाट सुःख पाउँछन् । सरकारी कागजात कार्यालयमा राख्ने हो कि बिचौलियाको घरमा राख्ने हो सरकार ? यसको जवाफ जनताले मागिरहेका छन् । सरकारबाट बिचौलिया शक्तिशाली हो ?
देश नै यिनीहरुलाई दिइसकेको हो ? खुल्ला रुपमा बिचौलियाले जनता ठग्दा प्रहरी प्रशासन के हेरेर बसेका छन् ? यिनीहरुलाई कारबाही कहिले ? बिचौलियाले बनाएको मन्त्रीहरुबाट के अपेक्षा राख्न सकिएला ? जनताले यस्ता मन्त्री, नेता भएको देशको विकास होला ! ठग्ने काम रोकिएला भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । भक्तपुर